I-DialogTech: UkuBiza ngokuBiza kunye nokuHlola ukuHlola | Martech Zone
I-DialogTech: Ukunikezelwa kweefowuni kunye noHlahlo lokuGuqula
NgoLwesithathu, Matshi 30, 2016 NgoLwesithathu, Matshi 30, 2016 Douglas Karr
Ngaphambi kwee-smartphones kunye nezixhobo eziphathwayo, xa ukuthengisa kwidijithali kwakuyi-100 yeepesenti kwidesktop, ukubonakaliswa kwakulula. Umthengi ucofe intengiso yenkampani okanye i-imeyile, watyelela iphepha lokufika, kwaye wagcwalisa ifom yokuba ibe yinkokeli okanye ugqibezele ukuthenga.
Abathengisi banokubopha oko kukhokelela okanye bathenge kwindawo efanelekileyo yokuthengisa kwaye balinganise ngokuchanekileyo imbuyekezo kwinkcitho nganye kunye nejelo. Bafuna nje ukuphonononga konke okuchukumisiweyo ukumisela ixabiso lesitishi ngasinye, kwaye banokwandisa ifuthe labo kwingeniso ngokutyala imali ekusebenzeni nasekupheliseni okungasebenziyo. ICMO ingalukhusela ngokuzithemba uhlahlo-lwabiwo mali kwi-CEO ngokubonisa ifuthe layo kwingeniso.
Kodwa kwihlabathi lanamhlanje lokuqala elihamba -hambayo apho abathengi abaninzi nangakumbi baguqukayo ngokufowuna, ukubonwa kungumceli mngeni omkhulu- hayi kuphela ekufumaniseni umthombo wefowuni, kodwa nakwisiphumo esiphumela. Ezi zigidi zeefowuni zenyanga ziwela ngaphandle kwembono yezixhobo ezininzi zentengiso, zenza umngxuma omkhulu omnyama kubathengisi beenkcukacha zentengiso zixhomekeke ekuqinisekiseni i-ROI kunye nokuphucula ukuveliswa kwengeniso. Le datha malunga nokuguqulwa ngomnxeba ilahleka ngonaphakade. Le datha inokubandakanya:
Umthombo wentengiso womnxeba: Sesiphi iselfowuni, idigital, okanye ishaneli engaxhunyiwe kwi-intanethi eqhube umnxeba-kubandakanya intengiso, umkhankaso, kunye nokukhangela amagama aphambili- kunye nawo nawaphi na amaphepha ewebhu kunye nomxholo kwindawo yakho ofowunelwa ngumntu owujongileyo ngaphambi nasemva kokufowuna.
Idatha yomfowunelwa: Ngubani lo ufowunayo, inombolo yakhe yefowuni, indawo ahlala kuyo, usuku kunye nexesha lomnxeba, kunye nokunye.
Uhlobo lomnxeba: Yayiyintoni injongo yomntu ofowunayo- ngaba yayiyifowuni yokuthengisa okanye olunye uhlobo (inkxaso, i-HR, ukucela imali, ukungaziphathi kakuhle, njl.
Iziphumo zomnxeba kunye nexabiso: Apho kuhanjiswe khona umnxeba, incoko ihlale ixesha elingakanani, bekushiwo ntoni emnxebeni, kwaye ukuba umnxeba utshintshelwe kwithuba lokuthengisa okanye kwingeniso (kunye nobungakanani okanye ixabiso lelo thuba).
Ukuzimasa kweefowuni ngowona mceli mngeni ucofayo ujongene nabathengisi abaqhutywa yidatha namhlanje. Ngaphandle kwayo, abathengisi abakwazi ukulinganisa ngokuchanekileyo i-ROI yentengiso kunye nokwandisa inkcitho kwizinto eziqhuba ngokwenyani kunye nengeniso. Ukongeza, abathengisi abanakho ukukhusela ngokuzithemba uhlahlo-lwabiwo mali kwi-CEO. Ngamafutshane, umngxunya omnyama ubeka amaqela okuthengisa phantsi koxinzelelo olwandisiweyo lokukhusela ixabiso lawo kunye neendleko kubathengi bamashishini.
“Ukufowuna kungena sesinye sezibonakaliso zokuthenga ezomeleleyo kulo naluphi na uhambo lwabathengi. I-DialogTech yenza ukuba amaqela okuthengisa amashishini kunye nee-arhente zikwazi ukwandisa amaphulo edijithali kwiminxeba yabathengi besebenzisa izisombululo ezifanayo ze-martech kunye neenkqubo abasele bezisebenzisa ukucofa. ” -Irv Shapiro, i-CEO, Ingxoxo yencoko yababini
Ingxoxo yencoko yababini isebenza njengeqabane elinobuchule kumashishini angaphezu kwama-5,000, iiarhente, kunye neenkampani ezikhula ngokukhawuleza kwiintlobo ezahlukeneyo zamashishini. Abathengi bangoku baquka iBen & Jerry's, HomeFinder.com, Comfort Keepers, Terminix, enamatyala amathathu okusetyenziswa anyanzelisayo F5 Imithombo yeendaba, HoteleCorp, yaye Amaziko okulala oQeqesho lokulala.
Sebenzisa umkhondo osebenzayo wokulandela umkhondo kunye nokulandela umkhondo wokuguqula, abathengisi banokwandisa i-AdWords kunye nemikhankaso yokukhangela ye-Bing ukuqhuba kungekuphela nje iifowuni, kodwa abathengi kunye nengeniso:
Sebenzisa ukulandela umkhondo weNqanaba eliPhambili ukuFumanisa kunye nokuPhucula i-ROI Qonda ngokuthe ngqo ukuba iphulo lakho lokukhangela elihlawulelwayo liqhuba njani iifowuni, emva koko ulungiselele amagama aphambili, iintengiso, iphepha lokufika, iindawo, kunye neentsuku / amaxesha aqhuba ezona fowuni zabathengi (kunye nezona zibalaseleyo).
Abafowunelwa bendlela abasekwe kwiDatha yokuKhangela uMnxeba: Sebenzisa idatha yokulandela umkhondo efakwe ngexesha lokufowuna ukuze uhambise umnxeba ngamnye ngokugqibeleleyo, ubazise kowona mntu ulungileyo ukuba abaguqulele kwintengiso. Itekhnoloji yokuhambisa umnxeba inokuhambisa abafowunelwa ngexesha lokwenyani ngokusekwe kuluhlu olubanzi lwezinto onokukhetha kuzo, kubandakanya umthombo wentengiso (amagama aphambili, intengiso, kunye nephepha lokufika), ixesha kunye nosuku, indawo yomntu ofowunayo, kunye nokunye.
Hlalutya iincoko zokuphucula iPPC: Sebenzisa incoko kubahlalutyi Itekhnoloji ukubona ukuba abafowunelwa abakhangeliweyo bahlawulelwe basebenzise umsila wakho omde okanye amanye amagama aphambili, indlela abazichaza ngayo iingongoma zabo zentlungu kunye nezisombululo abanomdla kuzo, kunye nokunye. Ungalusebenzisa olo lwazi ukuze wandise okanye uhlalutye ukujoliswa kwegama eliphambili kwaye wenze umyalezo wentengiso kunye nokufika wephepha usebenze ngakumbi.
Iqonga le-DialogTech lisombulula enye yeyona mingeni icinezelayo kwihlabathi lanamhlanje lokuqala lokuhamba ngokususa umngxunya omnyama kwintengiso yokusebenza kwedatha kwiifowuni ezingenayo. Njengoko abathengisi bajongana noxinzelelo olonyukayo lokuqhuba kungekuphela ekukhokeleni kodwa kwingeniso, iqonga leDialogTech lixhobisa abathengisi ngedatha yokunikezela umnxeba efunekayo ukutyala ngokuzithemba kumaphulo aqhuba iminxeba, kunye netekhnoloji yokuguqula eyimfuneko yokuguqula abafowunelwa babe ngabathengi. Kukunikezela umnxeba kunye netekhnoloji yokuguqula eyakhelwe ngokukodwa abathengisi abasebenzela iifowuni nakweyiphi na indawo kwaye inokusetyenziswa kunye - okanye ngokuzimeleyo ngokupheleleyo kwiziko leminxeba leshishini.
Idatha yokunika umnxeba isiphelo sedatha: Kakhulu ngaphezulu kokulandela umkhondo wefowuni. Esona sisombululo sixelela abathengisi ukuba amaphulo abo aqhuba njani iifowuni zabathengi, ukuba iifowuni ziguqulela kwintengiso, kwaye kutheni-ukuvala iluphu phakathi kwedola echithwe kunye nedola eliyifumeneyo.
Itekhnoloji yokuguqula umnxeba okwenyani: Esona sisombululo sabarhwebi kulawulo lokuhamba kunye nokwenza ukuba onke amava onxibelelwano afumaneke ngexesha lokwenyani, ukuqinisekisa ukuba umnxeba ngamnye uqhagamshelwe kwangoko koyena mntu ulungileyo ukuba abaguqulele kwintengiso.
I-DialogTech isandula ukwenziwa Imvelaphi yeTrak ™ 3.0 Isisombululo sokuqala kunye nesokulandela umkhondo esenzelwe ukuhlangabezana nedatha, ukufikeleleka, ukuthembeka kunye nokuphumeza iimfuno zokuphunyezwa kweenkampani zeFortune 1000, imibutho emikhulu eyahlukeneyo kunye neearhente zentengiso abasebenza nazo.
Ukongeza kwi-SourceTrak 3.0, i-DialogTech isungule ezi zisombululo zilandelayo kwi-2015, ngakumbi amandla e-Voice360® iqonga:
SpamSentry ™ Spam Ukuthintela umnxeba: Esona sisombululo kushishino lokulandela umkhondo olusebenzisa ubuchwephesha bokufunda, oomatshini bokufunda obuyekisa iminxeba yobuqhetseba nengafunekiyo ngaphambi kokuba bafike kwiqela lokuthengisa lenkampani. SpamSentry Ikhusela idatha yokufowuna yogaxekile ukuba ingaveli kwi kubahlalutyi abathengisi baxhomekeke ekulinganiseni ukusebenza kwephulo lokuthengisa elihambahamba. Iimpawu eziphambili zibandakanya: iinethiwekhi ezingezizo ezenziweyo, ezinokuhlengahlengiswa kugaxekile omtsha, kunye netekhnoloji yokucinezela. Funda ngakumbi kwi:
I-DialogTech yoThengiso lweSelfowuniIsisombululo sokuqala nesipheleleyo sentengiso yokulandela umkhondo, ukulawula, kunye nokwenza ngcono iifowuni zabathengi ezivela kwintengiso eshukumayo. Esi sisombululo sikwabonelela abathengisi ngezona zichanekileyo Idatha yamagama aphambili kwinqanaba ledatha yolwandiso lweefowuni zikaGoogle. Ngokudibanisa nefowuni, amandla ongezelelweyo abandakanya: Ukuhamba ngomnxeba ngomxholo, Ingxoxo yokurekhoda umnxeba kunye kubahlalutyi, kunye nokudityaniswa ukubandakanya umfowni othile kubahlalutyi idatha ene-martech kunye ne-adtech izicelo zokuphucula ukusebenza kwephulo.
LeadFlow ™ yokuHlawula ngefowuni nganyeEyona ndlela iphambili yokufowuna, unikezelo, kunye nesisombululo kulawulo esakhelwe iphulo lokuhlawula iifowuni nganye. LeadFlow inika abaxhasi kunye nabathengisi bokusebenza kulawulo olupheleleyo apho zikhokelela khona iifowuni kuzo zonke iitshaneli zentengiso, ezibiza ukubalwa njengezikhokelo ezifanelekileyo, nokunye okuninzi.
tags: hlala uhlalutyoumnxeba umnikeloukuguqula umnxebaiziphumo zomnxebaIxabiso lokufowunaidatha yomntu ofowunayoUhlalutyo loguquleloingxoxoumthombo wentengiso womnxebauhlobo lomnxeba
Izizathu ezi-3 zokuThengiswa kwamaQela ziyasilela ngaphandle koHlahlelo
Izibonelelo ezi-6 ze-Twitter zokuKhuthaza iBrand yakho